Matangiro Akaita Halloween—Yakatangira Kupi? | Mibvunzo yeBhaibheri
Bhaibheri haritauri nezveHalloween. Asi matangiro akaita mutambo weHalloween uye zvinoitwa mazuva ano painenge ichipembererwa zvinoratidza kuti inobva padzidziso dzenhema dzine chokuita nevanhu vakafa uye madhimoni.—Ona musoro unoti “Matangiro akaita Halloween uye zvinoitwa pakuipemberera.”
Bhaibheri rinonyevera kuti: ‘Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anobvunza n’anga kana anobvunza masvikiro kana anobvunza vakafa.’ (Dheuteronomio 18:10-12, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona) Kunyange zvazvo vamwe vachiona sokuti kupemberera Halloween ndekwekungonakidzwa uye hapana chakaipa, Bhaibheri rinoratidza kuti zvinoitwa pakuipemberera zvakaipa. Pana 1 VaKorinde 10:20, 21 panoti: “Handidi kuti mugovane nemadhimoni. Hamunganwi mukombe waShe uye nomukombe wamadhimoniwo.”—Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.
Matangiro akaita Halloween uye zvinoitwa pakuipemberera
Samhain: Halloween inogona kunge yakatangira pa“mutambo wechihedheni wainzi Samhain waiitwa kare nevanhu vanobva kunyika dzakadai seScotland, Wales, Ireland nedzimwewo makore anopfuura 2 000 adarika,” rinodaro bhuku rinonzi The World Book Encyclopedia. “Vanhu vacho vaiti vanhu vakafa vaigona kufamba pakati pevanhu vapenyu panguva yacho. Panguva yaiitwa mutambo uyu, vanhu vapenyu vaigona kushanya vachiperekedzwa nevanhu vakafa.” Asi Bhaibheri rinodzidzisa zvakajeka kuti vakafa “havana kana chavanoziva.” (Muparidzi 9:5) Saka havakwanisi kutaura nevapenyu.
Hembe dzinopfekwa pakupemberera Halloween, uye zvinhu zvinoitwa musi wacho: Rimwe bhuku rinonzi Halloween—An American Holiday, An American History rinoti, vanhu vaiita mutambo uyu vaipfeka zvinhu zvinotyisa vachiitira kuti midzimu yaifamba-famba ikavaona ifunge kuti ndevamwe vavo yobva yavasiya. Vamwe vaipira zvihwitsi kuti vafadze midzimu iyi. Kare kare kuEurope, vatungamiriri vechechi yeRoma vakatangawo kuita zvaiitwa pamutambo uyu, uye vanhu veRoma vaienda paimba imwe neimwe vakapfeka hembe dzaipfekwa pamutambo uyu vachikumbira zvipo. Asi Bhaibheri haribvumiri kuti munhu uti uku uri kunamata Mwari uku uri kuita tsika dzechitendero chenhema.—2 VaKorinde 6:17.
Zvidhoma, zvitokwani uye varoyi: Izvi zvagara zvichizivikanwa kuti zvinhu zvine chokuita nechidhimoni. (Halloween Trivia) Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti hatifaniri kuita zvinhu zvine chidhimoni mukati.—VaEfeso 6:12.
Manhanga anoshandiswa paHalloween: Kare kare kuBritain, “vatendi vaienda paimba imwe neimwe vachikumbira zvokudya vachiti vanozopa munamato kuhama dzakafa dzomunhu avapa zvokudya,” uye vaitakura “zvinhu zvakafanana nembatatisi vobvisa zvomukati voisa raiti mukati rairatidzira mweya womunhu unenge wakavharirwa mupurigatori.” (Halloween—From Pagan Ritual to Party Night) Vamwe vanoti maraiti aishandiswa kudzinga mweya yakaipa. KuNorth America mumakore okuma1800 vanhu vakanga vava kushandisa manhanga kwete zvinhu zvakaita sembatatisi nokuti aiva ari nyore kuwana uye ari nyore kuabvisa zvomukati vachigadzira zvavanoda. Zvinhu zvinenge zvichiitwa pakupemberera mutambo uyu zvakadai sokuti mweya haufi, purigatori uye kunamatira vanhu vakafa zvose hazvibvi muBhaibheri.—Ezekieri 18:4.
Mazororo akawanda anopembererwa kwaunogara akabvepi? Uchashamisika ukanzwa mhinduro dzacho.